ခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ရဲ့ အသေးစိတ်ကြေငြာချက်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူရေးအဖွဲ့ရဲ့ အသေးစိတ်ကြေငြာချက်။
Posted by အာဂ on Aug 27, 2014 in Arts & Humanities, Creative Writing | 35 comments
ခေါင်းလောင်ကြီးဆယ်ယူတဲ့အခါမှာ လေကျယ်မိတဲ့အတိုင်း ရက်ကတော့ ပြည့်သွားပြီ ။ ဒီတော့ နဂလင်းတစ်ယောက်ဘာဆက်လုပ်ရမယ်မသိဖြစ်လာသည်။ ဒီတော့ ဘယ်သူမှ သက်သေပြလို့မရတဲ့ ဟာတွေကို သက်သေတည်မည်လို့ဆုံးဖြတ်ကာ။ နဂလင်း တစ်ယောက် အပျော်ကြီးပျော်နေရှာသည်။ ဒီတော့ကြေငြာချက်ထုတ်မည်။
”ရက်ပြည်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကြေငြာရ ရင် ခေါင်းလောင်းကြီးအားရှာတွေပါပြီ ဒါပေမဲ့ အဲဒီခေါင်းလောင်းကို အိမ်လိုလုပ်နေကြသော နဂါးများက အိမ်ပြောင်းရမယ်” “ဒီအတွက် သူတို့ ပစ္စည်းတွေသယ်ရရွေ့ရတဲ့အခါမှာ လျပ်စစ်မီးကလည်း မရှိတော့ မီးထွန်းပြီးတော့ ပြောင်းရွေ့နေရတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီလို သူတို့ ဖုယောင်းတိုင်မီး ထွန်းပြီးပြောင်းရွေနေ့တာ လူတွေကို မသိစေလိုဘူး”
“ ဥပမာ တရုတ်ကြီးတို့ ဘာတို့ တွေ့ရင် လာဖမ်းကြ ၊ဆေးဖော်ကြမှာစိုးရိမ်တယ်။နောက် နဂါးသိုက်ဆိုတာက ကလည်း ရတနာတွေ ထွက်တာများတော့ သိုက်တူးသမား ခရိုနီ ၀ါ၊ပြာ၊တွေက လာပြီး သိုက်တူး ရင် ဒုက္ခရောက်မှ စိုးလို့ နဂါမင်းက တောင်းပန်တာကြောင့် အခုမှထုတ်ဖော် ပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။”
“ သေချာတာကခေါင်းလောင်းကတွေ့နေပြါပြီ…ဘားမိနည်း ဘားမိဟန် နဲ့ရှာထားတာပါ။” နောက်ထပ် ရက်တိုးပြီးတော့ ဆယ်ယူ ဦးမှာပါ။ မရရအောင်ဆယ်ယူပြီး ဘုရားပေါ်မှာ ပူဇော်မှာပါ။”
“ ဒီခေါင်းလောင်းကို ပြန်ပေးဖို့အတွက်လည်း နဂါမင်းနဲ့ သဘောတူညီမှုရပြီးပါပြီ”
“အတိအကျပြေရရင်တော့ သမ္မတကြီးပြောထားတဲ့ နွားနို့တွေတိုက်ပြီးအကြိုသဘောတူညီမှုရရှိ ထားတာဖြစ်ပါတယ်။”
“သိုပေမဲ့ ဒီလို အကျိုးရှိရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အလုပ်ကိစ္စမှာ ပြည်ပအဖျက်အမှောင့် ပယောဂ တွေရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်း ပေါ်တူဂီလူမျိုး နတ်စိမ်းဖြစ်နေတဲ့ ငဇင်ကာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်း ပါဝါအလျောက် ပရလောက မှာ နာမည်ရှိနေတော့ စိတ် ပူရပါတယ်။”
“ မြန်မာပြည်သူတွေကိုလည်း သူကတော်တော် လေးမုန်းနေပါတယ်။ဒိတော့ ဒံပေါက်တို့ ဘာတို့ကျွေးပြီး နှစ်သိမ့် ထားသော်ငြား သူကိုတော့ ဘာသာစကားအခက်ခဲကြောင့် နည်းနည်း ယုံကြည်ရဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။”နောက် တစ်ချက်သန်လျင်က သူအုတ်ဂူ ပေါ်မှာ အတွဲတွေလာလာကမြင်းကျောထားနေတာရယ်။ အမှိုက်တွေညစ်ပွနေတာ၊ကွန်ဒုံးတွေ၊ အရက်ပုလင်ခွံတွေ စသဖြင့် ညစ်ပတ်နေတာကို ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးဖို့ လည်းသူတောင်းဆိုထားပါတယ်။ သူနဲ့အတူ အပေါင်းပါဖြစ်တဲ့ နတ်သျင်နောင် ကိုလည်း အနည်းငယ်သတိထားရမှာပါ။အခုလောလောဆယ်ကတော့ နတ်သျင်နောင်က ဘာသာပြန်လုပ်ပေးပြီးကြားဝင်စေ့စပ်ပေးနေပါတယ်။ ” ဒါကတော့ လတ်တလောထုတ်ပြန်ချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။”
သတ်မှတ်ရက် ထပ်မံ ပြည့်သွားသော်…။ခေါင်းလောင်းက ဆယ်လို့မရ လှူထားတဲ့ ပိုက် ပိုက်တွေလည်း ကုန်ခါနီးပြီ…..ကြေငြာချက်ထပ်မံထုတ်ရတော့မည်။ နဂလင်း တစ်ယောက် ခေါင်းကုတ်ကုတ်နဲ့….။ကြေငြာချက်ထပ်ထုတ်သည်။
“မင်္ဂလာပါ။ ခေါင်းလောင်းကြီးအား ဆယ်ယူရန် ပဌာန်းဆက်များဖြင့် နဂါး ၊နတ် ၊ ပရလောက သားတို့အားအကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ပြီး ဆယ်ယူရရှိခါနီးတွင်း နဂါးများ ဘက်မှ နေရာပြောင်းလိုသူနဲ့ ၊မပြောင်းလိုသူ ဟု အဖွဲ၂ဖွဲ့ကွဲကာ ပရိက္ခ များဖြစ်ပေါ် နေပြီး ငဇင်ကာအစိမ်းနတ်သရဲကလည်း မူလက သဘောတူညီချက်ထက် မိမိတို့ လုပ်ဆောင်မပေးနိုင်သော တောင်းဆိုချက်များစွာဖြင့် တောင်းဆိုလာသည်က တစ်ကြောင်း။နဂါးမင်းကြီးရဲ့ မိဘုရား ကလည်း ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရကာ ထိုကိုယ်ဝန် အား အဆိုပါ ခေါင်းလောင်းထဲမှ ဖွားမြင်မှသာ နောင် ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလျင် ဖူးတွေ့ ရမည်ဟု အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ အိပ်မက်ပေးသော်ကြောင့် ထိုခေါင်းလောင်တွင်သာ မွေးဖွားလိုသောကြောင့် တစ်ကြောင်း။ ငမိုးရိပ်မိချောင်း၊ရှင်မွေးလွန်း၊မင်းနန္ဒ စသဖြင့်သော သူများကလည်း သူတို့ ပိုင်နက်နယ်မြေနဲ့ နီးစပ်သောကြောင့် သူတို့ အား မပူဇော် မပသ မိသည့်ကြောင့် တစ်ကြောင်း မျိုးစုံသော အနှောင့်ယှက်ပြဿ
နာများကြောင့်…တစ်ကြောင်း…။ ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူမည့်အချိန်အားနောင်၂၀၂၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ စတင်ရန် မလိုတော့သိအချိန်ကာလသို့တွင်သာ ဆယ်ယူရန် မြစ်စောင့်နတ်ပေါင်းစုံ၊နဂါးပေါင်းစုံ(ပြောင်းရေး/မပြောင်းရေး)၊ငဇင်ကာနတ်စိမ်းအုပ်စု၊နတ်သျင်နောင်၊ငမိုးရိပ်မိချောင်း၊မလတ်တို၊မလတ်ရှည်၊ရှင်မွေးလွန်း+မင်းနန္ဒာ၊ကျွန်တော်တို့ နဂလင်း ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေး ပါအဖွဲဝင်များ အားလုံးသဘောတူညီမှုအရ နောင်၂၀၂၀ခုနှစ်သို့ပြောင်းရွေ့လိုက်ရပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျာ။”
၂၀၂၀ ဆိုတော့လည်း စောင့်ရုံပေါ့ဗျာ…
ဒီကြားထဲမှာ ဒါကို အကြောင်းပြပြီး ဘယ်လိုအမြတ်ထုတ်ရမလဲ တွေးလိုက်ဦးမယ်
ကွကိုယ်…ဖွေးဖွေးလေးကို…ငမ်းနေတာမှ ဟုတ်သးတယ် ။ သွား ငမ်းတော့မယ်ဗျာ ။
နေပါဦး…ဒီမှာ ဖွေးဖွေးပုံလေးကြည့်ပြီး… ဂလုလို့ မ၀သေးဗူးးးးး
ဒီမှာ….FB ကနေ…မ လာတယ် ။
ဓမ္မစေတီရဲ့သဘောတရားက အမှန်တရားကိုတည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ဖော်ပြပါပိုစ်မှာလို မေးစရာတွေဖြစ်နေတာက အမှန်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ သိပ္ပံနည်းပညာနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်နေတယ် ။ အခုခေတ်မှာ ဒီလိုကိစ္စဖြစ်ပြီး မီဒီယာအားလုံးမှာ hot အဖြစ်ဆုံး ၊ တနိုင်ငံလုံးက အာရုံစိုက်နေတာက သေချာစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
(ဖော်ပြပါပိုစ်ကို soemin lwin ဆီမှကူးယူဖော်ပြပါတယ်)
၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါသည်။သို့သော် အလွန် သိလိုပါသည် ဦးဦးစံလင်းဗျ။
၁။ ခေါင်းလောင်းကြီးလို့ ဘယ်လိုသိပါလဲဗျ။
၂။ရွှေရောင် နဂါးကြီးက ဘယ်လိုပုံလဲဗျ။
၃။နဂါးတွေ ရေအောက်မှာပူဇော်နေတဲ့ မီးက ဘယ်လိုမီး မျိုးလဲဗျ။ လူ့ပြည်မှာသုံးရင်ဖြစ်နိုင်လောက်မလားဗျ။
၃။နဂါးကြီးကို လူ့ပြည်အလည်ခေါ်လို့ ရမလား၊ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံလေးများ ရိုက်ခွင့်ရမလားဗျ။
၄။ခေါင်းလောင်းရဲ့ အတိုင်းအတာ ကဘယ်လောက်ရှိလဲဗျ။
၅။ခေါင်းလောင်းတွေ့တာ သေချာနေရင် နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆယ်ယူတာ ပိုမသင့်တော်ဘူးလားဗျ။
၆။ရှားပါးသမိုင်းဝင်တွေ့ရှိချက်ကြီးကို ကမ္ဘာ ကို ချပြလို့ရမလားဗျ။
၈။နဂါးမကြီးရဲ့ အမြီးကော သဲစုပ်စက်ကြီးနဲ့ လွှတ်ပြီလားဗျ။
၉။နဂါး ဘယ်နှစ်ကောင် (ယောက် ဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိလို့)တွေ့တာလဲဗျ။
၁၀။ရေနောက်ကျိနေတဲ့ထဲမှာ နဂါးမင်းရဲ့အရောင်ဘယ်လိုသိလဲ၊ရိုးရိုး နဂါးတွေနဲ့ ဘယ်လိုခွဲသလဲဗျ။
၁၂။ခေါင်းလောင်းနဲ့အတူ တခြားသမိုင်းအခေါက်အထားတွေတွေ့သလားဗျ။သမိုင်းသုတေသီတွေကော ဒီရှားပါး ထူးခြားမွန်မြတ်လှတဲ့ တွေ့ရှိချက်အပေါ် သုတေသန လုပ်ခွင့် ရမလားဗျ။
၁၃။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဦးစံလင်းရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ယုံကြည်စောင့်နေကြတာဆိုတော့ သက်သေပြချက်လေးတစ်ချက်လောက်များပြနိုင်မလားဗျ။
၁၄။ဦးစံလင်းကတော့ အားလုံးရဲ့ ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာ နိုင်ငံကျော် လိမ်လည်မှု မကျူးလွန်ဘူးလို့ ယုံပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။
၁၅။ရေပေါ်ပေါ်ဖို့ သို့မဟုတ် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြဖို့ နဂါးမင်းရဲ့ ခွင့်ပြုချက် လိုမယ်လို့တော့ မပြောဘူး မဟုတ်လားဗျ။
၁၆။ နဂါးတွေ ခေါင်းလောင်းကို ပူဇော်နေတာ ဘယ်တော့ပြီးမလဲဗျ။
( အမှန်တကယ်သာဆိုရင် ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သမိုင်းအတွက်၊နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ဆိုရင်တော့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော် ကျွန်တော့မှာ ဆက်စပ်တွေးတောနိုင်စွမ်း၊ သိနိုင်စွမ်းအားနဲလွန်းလို့ မေးနိုင်တာလေး သိချင်တာလေး မေးမိတာပါဗျ။ If……..)
တောက်စ် ( ခရက်ဒစ် ကိုအာဂ)
ကျွန်တော်တို့လူတွေက အလိမ်ခံပြီးယုံပေးနေကြတာ ပါခင်ဗျာ
ဒီလိုထေရာတို့ဝါဒကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စော်ကား.. သာသာနာဖျက်နေတာကျ…
အသံမထွက်တဲ့.. မဟနဆတော်ကြီးများကိုသာ.. အံ့သြမိကြောင်း…
အဲဒီ “ဘားမိနည်း ဘားမိဟန်” ဆိုတဲ့ စကားလေး ကြိုက်လွန်းလို့ ကြိုပြီး ခွင့်တောင်း ထားပါတယ်။
သောင်တူးစက်ကြောင့် အမြီး ညှပ်နေတယ် ဆိုလား၊ ပိနေတယ် ဆိုလား။ အဲဒီ ညီမတော် လေးရော လွတ်သွားပြီတဲ့လား။ :-))
ညီမတော်နဂါးမလေးလည်း အဲဒီအမြီးညှပ်ဝေဒနာကို အပြင်းအထန်ခံစားရင်း ဆေးကုသမှုခံယူဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြစ်ဝကနေ ပင်လယ်ပြင်ထို့မှတစ်ဆင့် စင်္ကာပူ ဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းဖြစ်ဖြစ် ဆေးကုသဖို့သွားပါကြောင်း..။ ဖြစ်နိုင်ခြေများတာကတော့ ထိုင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ထိုင်းကလူတွေကလည်း ဒါမျိုးယုံတတ်တော့လေ..။ ဒါပေမဲ့ ပြသနာ က ထိုင်းက ဂဠလုန်တွေများတဲ့ဒေသလို့ ထင်တဲ့အတွက် လောလောဆယ်တာဝန်ယူထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဖြစ်လဲ ၀န်ချုပ်ထံ အိပ်မက် မေးလ်ကနေစာပိုထားပါတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ကမ္ဘာမြေလွှာတွေက ကိုယ်ကသာ မသိတာ အောက်မှာ ရွေ့နေကြတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ အကွာအဝေးထိ ရွေ့နိုင်ကြတယ်တဲ့။ မြေအောက်လွှာတွေရွေ့ရင်း ခေါင်းလောင်းပါသွားနိုင်တယ်။
မပြုံးပြော တာကို ထောက်ခံတယ်။
1998 ခုနှစ်လောက်က ကျနော်သူငယ်ချင်းတစ်စု ဘူ မိ ဆင်းတွေ လက်ပန်လှ ဘက်မှ ရွှေသွားတူးကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ငွေကုန်တာ သာ အဖတ် တင်တယ်
သူတို့ နဲ့ အတော်ခပ်ဝေးဝေးနေရာမှာ တူး တဲ့ သူ (ဘာမှမသိ လုပ်ကွက်ချပေးလို့ တူး တဲ့သူ)က ပွင့် သွားတယ်
အဲတော့ မြေလှူပ်ယှားမှူ့ကြောင့် ရွှေ့ တယ်ဆိုတာကို လက်ခံ တယ်
ပညာသည်လိုပြောတမဟုတ်ဘူးနော် အရပ်တွေး တွေး ကြည့် တာပါ
ဟစ်ဟော့ သတင်းကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ပေးသွားပါသော ဦးအာဂ ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းဆယ်တဲ့အဖွဲနဲ့ နောက်တစ်ခါများဆုံတွေ့အုံးမယ်ဆိုရင် စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပါးလိုက် ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ အဲဒါကတော့ ခေါင်းလောင်းတွေကိုတော့ ငယ်ငယ်ထဲက ခုထိ နေရာအနှံမှာတွေ့ဖူးနေပြီး သားမို့ အကယ်လိုများ နဂါးမင်းကို ညှိနှိုင်းလို့ရရင် ကုန်းမြေပေါ်ကို အလည်ခေါ်ပြီး တပတ်ဆယ်ရက်လောက် စံမြန်းနေစေလိုပါတယ် နဂါးကို တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးလို့ လာကြည့်ချင်လို့ပါလို့။
အဲဒါလေး ပြောပေးနော် ဦးအာဂ ခင်ဗျ။
.အပေါ်မှာ ရွာသူကြီးကလဲ အလစ်မှာ ဘယ်ထောက်လက်သီးလေးကျွေး..
.အဲဒါကို အနီမှတ်လေး ချီးမြှင့်တဲ့သူက ချီးမြှင့်ဆိုတော့ကာ…
.ကျုပ်ကလဲ ခေါင်းလောင်းအကြောင်းတော့ တစ်နေရာရာမှာ ၀င်ပြောချင်နေတာနဲ့ အတော်ပါပဲ….
.ကျုပ်တို့ရဲ့ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူ အရ-
(၁) ခေါင်းလောင်းဆိုတာ ကိုယ်ကုသိုလ်ပြုပြီးရင် အဲဒါကို မှန်းပြီး သာဓုခေါ်ရင်း ကုသိုလ်ရစေနိုင်ဖို့
.အဝေးကသူတွေ ကြားအောင် ထိုးရတဲ့ ကုသိုလ်အချက်ပြ ကရိယာမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
.တုံးမောင်းလို ကြေးစည် လို စည် လို မောင်းလို ဟာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
.ခေါင်းလောင်းဟာ ရှိခိုးစရာ ၊ ပူဇော်စရာ ၊ အထွဋ်အမြတ်ထားစရာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး…။
.ဘုရားပစ္စည်းမို့ ရှိခိုးတယ် လို့လဲ စကားကပ်ပြီးအကြောင်းပြလို့မရပါဘူး….
.ဘုရားကိုယ်တိုင် သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ အသုံးအဆောင်ကိုသာ
.ဘုရားဂုဏ်တော်ကို ရည်မှန်းနိုင်သောအရာအဖြစ် နဲ့ ပရိဘောဂစေတီဆိုပြီး ရှိခိုးအပ်ပါတယ်။
.မဲမဲမြင်ရင်လျှောက်ရှိခိုးတဲ့ ကျောက်ခေတ်လူသားဘာသာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အလွန်ခြားနားပါတယ်…။
(၂) ခေါင်းလောင်းတစ်ခုကို ဘုရားကိုလှူ ပြီးရင်တော့ အဲဒါဟာ
.ဘုရားအတွက်ပဲသုံးရမယ့် ဘုရားဘဏ္ဍာ ရာနှုံးပြည့်ဖြစ်သွားပါပြီ…။
.အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးရတဲ့ အကျိုးအမြတ်ငွေကြေးဟာ ဘုရားအတွက်သာဖြစ်ရပါမယ်။
(၃) ဘုရားဘဏ္ဍာဖြစ်ပြီးသားခေါင်းလောင်းကို သိလျှက်နဲ့ လုယက်ယူဆောင်သူဟာ
.အဲဒါကြီးကို သိလျှက်နဲ့ လက်ခံသိမ်းဆည်းထားရင်
.ဘုရားဘဏ္ဍာကိုခိုးတဲ့ သူခိုးလက်ခံ ကြံရာပါဖြစ်ပါတယ်။
.အဲဒါ ရွှေရောင်နဂါးကြီး နှမြောပြီး ပေကပ် နေမှာစိုးလို့..
.အကုသိုလ်များပြီး နောက်ဘ၀ နဂါးကနေ တီကောင်ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့…..
ခေါင်းလောင်းတွေ့မှ မကောင်းပြောသူတွေကို ရွှေတိဂုံကုန်းပေါ် ခေါင်းလောင်းပေါ်တာ ထမ်းတက်ခိုင်းမြီ..။
သီချင်းစောင်းစောင်း သီချင်းထောင်း with Mandalay SMe and6others
အခုတော့သိပြီ စောက်ဆံတွေဖြုန်းသည် ….
အရင်တနေ့က ဆင်းငုပ်တာ နှုန်းပဲတွေ့သည်
ဂူဂယ်တောင် မျက်ခုံး လှုပ်လောက်သည်
အောက် လမ်း နည်းများသုံးကာ Search လုပ်ကြသည်
အော် …… ရူးတာပဲဖြစ်မည်
စောင်းထောင်းပြောမည် ရူးတာတော်သင့်ပြီ ….
သေးဆို – စောင်းထောင်း ထူးအိမ်သင်
သေးရေး – ကေအေဂျီ
နဂါးဆိုတာနဲ့ ပုံပြင်စာအုပ်တွေ ဘုရားစောင်းတန်းတွေမှာ ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ ရုပ်ထုတွေကိုဘဲ ပြေးမြင်လိုက်ကြပြီး…..အော် အိုက်လူကြီးပြောတာ ဟုတ်မှာဘဲလို့
စာမတတ်ပေမတတ်လဲမဟုတ်…ခေတ်ပညာတတ် ဘွဲ့ကောင်းကောင်းတေရပီး အိုက်ဂလိုတွေးတော့
နဂါးကို လူတွေက မြင်ဖူးကြတယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်က တော်တော်ဝေးဝေးမှာကျန်ခဲ့ဘီလို့
အိုက်ကိတ်စအတွက် သက်သေအထောက်အထားပြစရာလဲ ဘယ်တုံးကမှမရှိခဲ့ဝူးလို့ ဆိုတော့မှ
အော် ဂလိုလဲ ဟုတ်တာဘဲ…တဲ့ :-/
ကိုချိုတူးဇော် Fb က ကူးတင်းလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ရင်ဘတ်နဲ့တွားသွားရတဲ့ ပြိတ္တာတပိုင်း၊ တိရစ္ဆာန်တပိုင်း၊ အပါယ်လေးဘုံ ဘုံသားဗျ။
ဘူရိဒတ် ဇာတ်ထဲလဲ အဲသလိုကို ပြောခဲ့ပါကော။
နို့ နဂါး ကိုးကွယ်ပသ၊ ကန်တော့ကြတယ် ဆိုတော့၊ တောင်သူကြီးမင်းခေတ် ပုဂံပြည် ကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ သံဃာတွေကော နဂါး ကို ကန်တော့ကြသေးသလားဗျ။ ဒါဆိုရင်တော့ ထေရ်တို့ဝါဒ ကြီး လွဲနေပြီ ထင်ပါရဲ့။
တောင်သူကြီးမင်းကတော့ သူ့ခြံထဲက သခွားသီးလာခူးစားတဲ့ ဘုရင်ကို တူရွင်းနဲ့ ရိုက်သတ်မိရာကနေ မိဖုရားက သဘောကျ၊ လင်တော်ပြီး ဘုရင်မြှောက်ခံရတော့၊
သူ့စိတ်ထဲ နေ့တိုင်း ခြံထဲက နဂါးကို ပသခဲ့လို့ အကျိုးခံစားခဲ့ရတာ လို့လဲ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။
ဘုရင်ဖြစ်ပြီး တခမ်းတနား နဂါးရုပ်ကြီးထု၊ နတ်ကွန်းကြီးနဲ့ ပူဇော်ခဲ့သတဲ့။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ဆိုတာ သတ္တ၀ါတိုင်း မိမိပြုသောကံ ကို မိမိခံရတယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုအပေါ် အခြေခံ
တယ်။ တစုံတယောက်က တစုံတယောက်ကို ဖန်တီးဖျက်ဆီး လို့ မရလို့ ယုံကြည်တယ်။
ဒီလို ဖန်တီးဖျက်ဆီးမှု ရှိခဲ့ရင်လဲ ကံ ကံ၏ အကျိုးလို့သာ ယုံကြည်တယ်။ ဖန်ဆင်းရှင် ဆိုတာကို
တော်လှန်သော ၀ါဒ ဗျ။
ဒီမှာ တူတာလေး ကောက်နှုတ်ပြပါရစေ။
ခရစ်ယာန်တွေက ဘုရားသခင် အလိုတော်အရ၊ အရာရာ ဖန်ဆင်းတော်မူတယ် လို့ ယုံကြည်တယ်။
မွတ်စလင်တွေက အလာရ် ရှင်မြတ်သဘော အတိုင်း စီမံတယ် လို့ ယုံကြည်တယ်။
ဓါတ်သမား၊ ဂမ္ဘီရသမားတွေက အဘ တို့ လုပ်နေတာ၊ အဘတို့ စီမံနေတာ၊ အဘတို့
ဖျက်နေတာ၊ ပြုနေတာ စသဖြင့် ဘိုးတော်တွေကြောင့် လို့ ယုံကြည်သဗျာ။
အဲဒီ ဓါတ်လိုင်းနတ်လိုင်းထဲ ခပ်ရှုပ်ရှုပ် ချိုတူးဇော် က ၀င်ခဲ့ဖူးသဗျ။
သူတို့တရားထိုင် လိုက်ထိုင်။ သူတို့ ဒီလို အားထုတ် ဆိုတော့ လိုက်ထုတ်ပေါ့။ ပြီးတော့
ဘာသိချင်၊ ဘာလိုချင်လဲ ဆိုတော့၊ ၀ိဇ္ဇာတွေ အစွမ်းရှိ၊ သာသနာကို စောင့်နေတာ ဆို
ဘာဖြစ်လို့ တပ်ဖွဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို မတိုက်ပေးကြသတုန်း လို့ မေးတာ။ ဟဲဟဲဟဲ။
မောင်သီ့ သာ မေးကြည့်။
သူတို့ဖါသာ အေးအေးနေတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေကို မနှောင့်ယှက်နဲ့တဲ့။
အေးအေးနေတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ခရိုနီတွေနဲ့တော့ အတော် ရင်းသား။
သန်း ၆၀ ဒုက္ခခံနေရတဲ့ ပြည်သူတွေကိုတော့
ကံ ကံ၏အကျိုး လို့ပြောတတ်သေးဗျ။
ကိုယ့်လူတို့ရေ. . .
ငပေါပဒေသရာဇ်ခေတ် အယူ ပါလေ။
နေပါဦး ချိုအတုဇော်ကို မေးချဉ်တယ်.. အခြားဟာတွေက ထားလိုက်ပါ ကိုယ်ယုန်ကျီးရာ…။ စစ်ဘိုစုတ်တွေ မတရားတာ လက်ခံတယ်.. ဒါပေသိ အဖိနှိပ်ခံတွေက သူတော်ကောင်းလို့ ဘယ်သကောင့်သား ပြောလဲ..။ အားလုံးက ရရင်တီးမှာတွေချည်း မဟုတ်လား..။ သူတော်ကောင်း အနည်းအပါး ပါမည်ဗျာ..။ မြန်တျန့်မှ မဟုတ် နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးဒိုင်း ဒလိုချည်းပဲ။ ကုန်းဘောင်ခေတ်ကထင်တယ် ရဟန်းပျိုတပါး မန်းလေးတောင်ပေါ် တက်ပြီး လောကပါလနတ်ရုပ်စောင့်နေတဲ့ မောင်းဂျီး စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ထုတယ်ဆိုလား ခေါင်းလောင်းတီးတယ်ဆိုလား..။ မတရားမှုတွေ လက်ပိုက်ကြည့်နေရသလားပေါ့။ ပျံစဉ်းစားကြည့်ဗျာ ခံရတော့ မတရားဘူး အော်တယ်၊ ကိုယ်တိုင် အတ္တကင်းရဲ့လား။ နတ်အမြင်ကကြည့်လျင် နင်တို့ဖာသာ ကမြင်းကြောထလို့ ဖြစ်တာ ငါက နတ်သမီးတွေပစ် လာကယ်ရမလား..။ ကယ်ဖို့ကောင်းအောင်ရော သီလငါးပါး အောက်ထစ် လုံလို့လား။ သောက်ခွီး…။
ကိုချို့ ညီမတော်လေး အမြန် သက်သာပါစေ ဆုတောင်းတယ် ပြောပေးနော်။ :-))
ညီမတော်လေး အနေအထိုင်မတတ်တော့ အခု
ချုပ်ထားလို့ လှုပ်ရှားမရတဲ့ ..နဂါးမင်းတို့ …
အသွင်ထူးလို့ ..၀င်ပူးကာပြောဆို ..
C/D the Villager
ခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်ယူရရှိပြီးပါက MH-370 ကိုဆက်လက်ရှာဖွေဆယ်ယူပေးပါရန် မလေးရှားအစိုးရမှ ဦးစံလင်း( မြေပုံ ) အား ကမ်းလှမ်းသွားမည်ဟု တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ် ပြောသွား…..
ပြောမယုံသူတွေ နဂါးက ပူးလိမ့်မည်
အာရှမှာမြန်မာကသာ တီကောင် မြွေ နဂါးဖမ်းမည်..
ငါးမျှားချိတ်နဲ့ ကမ္ဘာသိရန်နဂါးမာန်တွန်သန်တစီစီ ကြားရမည်.။
နဂါးများဖမ်းမိရေးသည် မြွေလို အကင်ဆိုင် ရောက်ရှိစေရေး မဟုတ်ပါပြီ
ဟင်္သာ ကတော့ ပန်းချီကားတွေထဲမှာ အတောင်တွေ ဘာတွေက လှ
အပြင်မှာမြင်ရတာကတော့ ဘဲ ကို အမောက်တတ်ထားသလိုပါဘဲ။
နဂါးကတော့ ဘယ် လို နေမယ် မသိဘူးဗျာ
ခက်တာ က ဆင်ခြင်ဥာဏ်ကို အထူး ဦး စား ပေး တဲ့ ထေရ ၀ါ ဒ ကို ကိုးကွယ်နေသူတွေ က ဒီလိုပေါကြောင်ကြောင်တွေ လျောက်ပြောနေကြတာက တော့ ဘာသာကို တန်ဘိုးမဲ့အောင်လုပ်နေတယ်လို့ ခံစား ရ ပါတယ်။
ရီလိုက်ရတာ ဂဂ ရယ်။ တွေးလဲတွေးတတ် ရေးလဲရေးတတ်ပါရဲ့။ တခုပဲအေ မြစ်ဆိုတာ ရွှေ့တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးထားတော့ အခုမြစ်သုံးခုဆုံတဲ့နေရာက တချိန်က ကုန်းဖြစ်ပြီး တချိန်က မြစ်သုံးခုဆုံတဲ့နေရာက အခုကုန်းကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ပါ။ ဧရာဝတီမြစ်တောင် တချိန်က ပုဂံမှာ ရွှေဆံတော်ဘုရားနားကနေ ဘူးဘုရားနားရွှေ့သွားတယ်လို့ဆိုသေးတာပဲမဟုတ်လား။
ကြည့်ရတာ.. လူတွေ.. မြန်မာတွေ..
သဘောတာရားနဲ့အတွေးအခေါ်တွေကို.. စနစ်တကျ..ဆွေးနွေးငြင်းခုန်တာမျိုးကျ.. ဇာတိပြကြ…။
အရူး ဘုံမြောက်တဲ့ လူတွေ ရှိနေတာကို သူကြီး ရ
ဘာတဲ့ ဘားမိနည်း ဘားမိဟန်​ ဟုတ်​စ ။ ဒါနဲ့ ဘာကိစ္စ ​သောင်​တူးစက်​ကပါ​နေရတာလဲ ဟင်​။ အဲ့ ​သောင်​တူးစက်​ဆိုတာက ဘားမား တိုင်းပြည်​ထွက်​ပစ်​စီးလား ¿ စိန့်​တိုင်းက လာတဲ့ ပစ်​စီးလား ¿ ဒါမှမ​ဟုတ်​ နိပွန်​ကလား ¿ တစ်​ခြားတိုင်​ပြည်​ တစ်​ခုခု ကလာတာလား ¿ မသိလို့ ​မေးတာ​နော်​ ။ စိတ်​မဆိုး​ကြေး
အနော် ပြောတဲ့ ဘားမိးနည်း ဘားမိဟန်ဆိုတာ…က ဆြာဆံဠင်း ကျောတဲ့ ဂန်မီရ တွေ၊ပရလောက တွေ အထက်လမ်းပညာတွေ၊ဘော်ဒိုးတွေ၊နတ်တွေ၊နဂါးတွေနဲ့ ဆယ်တာကို ပြောတာပါ။သောင်တူးစက်ကတော့ ဟန်ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းလောင်းအကြောင်းပြပြီး တခြားဟာတွေတူးနေလားတော့မသိဘူး။ ဥပမာ နဂါသိုက်တို့ဘာတို့ ပေါ့လေ..ခိခိ။။။
ဒီလိုမျိုး တဘောတရားနဲ့အမှု ယူအက်စ်မှာဖြစ်လို့ကတော့.. မီဒီယာတွေရော..ရှိသမျှတီဗီတွေရော…
နောင်မဖြစ်အောင်..ဆောင်ရန်.. ရှောင်ရန်.. ကာကွယ်ရန်.. စသဖြင့်နဲ့အပြင်းအထန်ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြလိမ့်မပေါ့….။
တကယ်ယုံလို့လုပ်တာလား..။ နာမယ်ကြီးချင်လို့လား..။ ငွေလိုချင်လို့လား..။
သေသေချာချာ.. အဖြေရှာ.. နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်… အမှားမျိုးမမှားအောင်.. တခုခုချန်ရစ်တဲ့စကားမျိုးပြောစေချင်မိတယ်..။
အမှန် တော့ နဂါး ဆိုတာ သစား လိမ် ထင်ပါတယ် ယုံ မိတဲ့ လူတွေ နားကားသွားတာကို ပြောချင် ပုံ ရတယ်
အမှန် တော့ နဂါး ဆိုတာ စကား လိမ် ထင်ပါတယ် ယုံ မိတဲ့ လူတွေ နားကားသွားတာကို ပြောချင် ပုံ ရတယ်